Tin Maung Hlaing: တရုတ်-မြန်မာ ပထမ စစ်ပွဲ
တစ်ချိန်တုန်းက..မြန်မာ ရာဇ၀င်မှာ.. တိတိ ကျကျပြောရရင် ၁၇၆၀ မှာ..မြန်မာနိုင်ငံ မှာ စစ်ရေး အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့.. ဆင်ဖြူရှင် ဘုရင် ဆိုတာ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီ ဘုရင် လက်ထက်မှာ အလောင်းမင်းတရား လက်ထက်က
မအောင်မြင် ခဲ့တဲ့ အယုဒ္ဓယ (ထိုင်းနိုင်ငံ) ကိုအောင်မြင်ခဲ့ သလို..၊
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ တရုတ် ကျူးကျော်စစ် ဖြစ်တဲ့
တရုတ်-မြန်မာ စစ်ပွဲ ( Seno - Burmese War) (၄) ကြိမ်စလုံးကို
၁၇၆၅ ခုနှစ် မတ်လ အတွင်းမှာ ဆင်ဖြူရှင် မင်းတရားကြီးဟာ အယုဒ္ဓယကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်နေတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ အခွင့်ကောင်း ယူပြီး တရုတ် စစ်သည် ၃၅၀၀ က ကျိုင်းတုံမြို့ကို စတင်လုပ်ကြံ လာပါတယ် ။
ထိုစဉ် က ဗိုလ်ချုပ်နေမျိုး သီဟပတေ့ နဲ့ မြန်မာ တပ်အင်အား ၂၀၀၀၀ ဟာ ကျိုင်းတုံ ကနေ ယိုးဒယား ကို
ချီတက်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်ဖြူရှင် မင်းသည် လက်ဝဲ ဝင်းမှူး နေမျိုးစည်သူကို စစ်သည် သူရဲများနှင့် ချီတက် တိုက်ခိုက်စေပါတယ်။
တရုတ် တို့က စစ်သည်များ ထပ်မံဖြည့်တင်း ၍ ကျိုင်းတုံ ကို အထပ်ထပ် ဝန်းရံ တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ကျိုင်းတုံ မြို့တွင်း က တပ်တွေ ကလည်း ထွက်တိုက် တာနဲ့ တရုတ်တွေ ဆုတ်ခွာပြေးရပါတယ် ။ တရုတ် တို့ နောက် သို့ ခြေရာထပ် လိုက်လံ တိုက်ခိုက်ပြီး မဲခေါင်မြစ် အရောက်တွင် တရုတ် စစ်မှူး ကျဆုံးသွားပါတယ် ။
အဲဒီ စစ်ပွဲမှာ တရုတ်တို့ ဖက်မှ စုစုပေါင်း စစ်သည် ငါးသောင်း၊ မြင်းတစ်သောင်း အထိ ချီတက် လာပြီး တရုတ် စစ်သည် တစ်သောင်း ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီလို မရှု မလှ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် အတွက် ယူနန် ဘုရင်ခံ လျူစောက် မှာ မိမိကိုယ်ကို မိမိ အဆုံး စီရင်သွားပါတယ်။
၁၇၆၆ မှာ ဒုတိယအကြိမ် အနေနဲ့ တရုတ် တို့ဟာ ယူနန် ဘုရင်ခံသစ် ဦးဆောင်ပြီးဗန်းမော်ကြောင်းကနေ
ဆင်ဖြူရှင် ဟာ တရုတ် တပ်ကြီး မရောက်မီလေးတွင် ဗလ မင်းထင် ကွပ်ကဲစေ၍ အင်အား တောင့် တင်းသော မြန်မာ စစ်တပ်ကြီး တစ်တပ် ကို ဗန်းမော် တောင်ဘက်ရှိ မြန်မာ ခံတပ်ဖြစ်သော ကောင်းတုံ သို့ စစ်ကူ လွှတ်လိုက်ပါတယ် ။
ဗန်းမော်မြို့ ကို မြန်မာ တို့ဟာ တင်းကြပ်စွာ ထိန်းသိမ်းခြင်း မပြုတဲ့ အတွက် တရုတ် တို့ဟာ လွယ်လင့် တစ်ကူ ဗန်းမော် ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ကြပါတယ်။
ဆင်ဖြူရှင် ဟာ တရုတ် တို့ကို တွေ့ဆုံ တိုက်ခိုက်ရန် ဝန်ကြီး မဟာစည်သူ ကွပ်ကဲ တဲ့ စစ်တပ်ကြီးကို
ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်း မှ ချီတက်စေ၍ အခြား စစ်တပ်ကြီး တစ်တပ်ကို ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်း မှ လှေ များဖြင့် နေမျိုး စည်သူ ကို ကွပ်ကဲ၍ ချီတက်စေပါတယ်..။
ကျိုင်းတုံ မှာ မြန်မာ စစ်တပ်ကြီး သည် အကြိမ်ကြိမ် ထိုးစစ် ဆင်လာတဲ့ တရုတ် တို့ကို စစ်ကူများ ရောက် လာ သည့် တိုင်အောင် ခုခံ တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။
နေမျိုးစည်သူ စစ်တပ်ကြီး ဟာ ဗန်းမော် ကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက် လိုက်ပြီး တရုတ် စစ်တပ် ကို နှစ်ဘက် ညှပ်ပြီးကောင်းတုံ ခံတပ်မှမြန်မာ တပ်များ က ရှေ့မှ ထွက်တိုက်ကာ နေမျိုးစည်သူ တပ် က တရုတ် တို့ကို နောက်ကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ပါတယ် ။
တရုတ် တို့က ... ၎င်းတို့သည် မြန်မာ တို့၏ ထောင်ချောက်တွင်းသို့ ကျရောက်၍ သွေးထွက် သံယို များစွာဖြင့် ကျဆုံးကြသည်ဟု မှတ်တမ်းများတွင် ဝန်ခံထားကြပါတယ်၊
တရုတ် စစ်မှူး ချိုဟန်ပိုင် ဟာ ကျန်နေတဲ့ စားနပ် ရိက္ခာများကို ဖျက်ဆီးပြီး တပ်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ပါတယ်...၊
ဧရာဝတီ အနောက်ဘက် ကမ်းခြေ မှ ချီတက် လာသော မြန်မာ တပ်ကြီးဟာ ဧရာဝတီမြစ်ကို ဝိုင်းမော် တွင် ဖြတ်ကူးပြီးနောက် ဆီမာ မြောက်ဘက် ယောယင် တောင်တန်းများ အနီးမှာ စခန်းချ နေသော
တရုတ် စစ်တပ်ကို အောင်နိုင် ကြပြန်ပါတယ်၊
မြန်မာ တို့ဟာ တရုတ် စစ်တပ် ကို ဖိနင်း တိုက်ခိုက်ရင်း နေမျိုးစည်သူ ၏ တပ်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆက်လက်၍
စန္ဒား တိုင်အောင် ချီတက်ကြပြီး မဟာသီဟ သူရ ၏ စစ်တပ်ကြီး နဲ့ ပူးပေါင်း မိကြပြန်ပါတယ် ။
နယ်စပ် ရှိ တရုတ် တို့ရဲ့ ခံတပ် များကို မြန်မာ စစ်တပ်ကြီးတွေက သိမ်းပိုက်ပြီး ရှမ်း တရုတ်နယ် ရှစ်နယ် ကိုလည်း ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ တရုတ် မှတ်တမ်းတွေမှာ ယူနန် ဘုရင်ခံဟာ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်ခြင်းကြောင့် နာမကျန်း ဖြစ်တော့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
တရုတ် ဧကရာဇ် ချင်းလုံ ကို ယူနန် ဘုရင်ခံဟာ လိမ်လည် လှည့်ဖျားပြီး အစီရင်ခံတဲ့ အတွက် တရုတ် ဧကရာဇ် ဟာ အဲဒီ ယူနန် ဘုရင်ခံကို ပီကင်း ကိုခေါ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကို အဆုံးစီရင်စေခဲ့ပါတယ်၊
အဓိက ပြောချင်တာ ကတော့ တတိယ စစ်ပွဲ မှာပါ..
၁၇၆၇ ခုနှစ်မှာ တရုတ် တို့ တတိယ အကြိမ် ချီလာပြန်ပါတယ် ။ ယူနန် ဘုရင်ခံ ရာထူး ကို ထူးချွန်သော မန်ချူး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦး လို့ အသိအမှတ် ပြုခံရတဲ့ မင်းယွီ ကို ခန့်အပ်ပြီး စစ်သည် ၅၀၀၀၀ ပါဝင် တဲ့ တရုတ် စစ်တပ်ကြီးကို အုပ်ချုပ်စေပါတယ် ။ မင်ယွီ ဟာ သူ့တပ်ကိုနှစ်ပိုင်း ခွဲပြီး တစ်တပ်ကို သူကိုယ်တိုင် လိုက်ပါပြီးသိန္တီ ကို ချီတက်ပါတယ်၊
မင်ယွီ ဟာ မန်ချုး ဧကရာဇ် ချင်းလုံ ရဲ့သမက်တော်ဖြစ်ပြီး ကာဂျစ်ကစ္စတန် နိုင်ငံကြီး ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်အောင်နိုင် ခဲ့တဲ့ အတွက်ဘုရင် က သူ့ သမီး နဲ့ ထိမ်းမြား လက်ဆက်ပေးထားသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
တရုတ် သမိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ စစ်သူကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်..။
သိန္တီမြို့ ကို တရုတ် တပ်တွေက အလွယ်တစ်ကူ သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့ အခါမင်းကြီး မဟာစည်သူ ကွပ်ကဲ တဲ့ မြန်မာ တပ်ကြီး ဟာ တရုတ်တို့ စစ်ဦး ကို ဆီးကြို တိုက်ခိုက်ရန် အင်းဝ နေပြည်တော် မှ ထွက်ခဲ့ပါတယ် ။ မင်းကြီး မဟာ သီဟသူရ ကွပ်ကဲသော စစ်တပ်ကြီး ဟာ ရွှေစာရံ မှ မြစ်ငယ်မြစ် ကို ဆန်တက်ပြီး လျှင် တရုတ် တပ် ကို သိန္နီနှင့် အဆက်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားပါတယ် ။
နေမျိုးစည်သူ ကွပ်ကဲ တဲ့ တတိယ မြန်မာ့ စစ်ကြောင်းဟာ တရုတ် စစ်မှူး အာဆင်ဂျီး ကွပ်ကဲသော တပ် ကို ဆီးပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ ချီတက်ခဲ့ပါတယ် ။
ဂုတ်ထိပ် အရပ် မှာ မဟာစည်သူ တပ် နဲ့ မင်းယွီ ၏ တပ်တို့ တွေ့ဆုံ၍ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ မြန်မာ တို့ မရှုမလှ အရေး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်၊
အဲဒီနောက်မှာ တရုတ်တပ်တွေဟာ ဆက်လက် ချီတက် လာပြီး တစ်ကြောင်း က ယခု ၀မ်ခေါင်းရွာ (ယခုမေမြို့ အနီးစခန်း အနီး) အထိရောက်လာခဲ့ သလို အင်းဝ အနီးမှာ ရှိတဲ့ မြစ်ငယ် မြစ် ကမ်း အနီးကမှ စဥ့်ကူး အထိရောက်ခဲ့ပါတယ်.. ။ အရမ်းကို နီးကပ်တဲ့ အနေအထားပါ...။
ဆင်ဖြူရှင် ဟာ အဲဒီအနေအထား ကို သိရက် နဲ့ ပျာယာခတ် မနေပဲတည်ငြိမ် ရင့်ကျက် စွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်၊
အဲဒီအချိန်က..မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ဆင်ဖြူရှင် ၏ ပြုမူချက်ပေါ်တွင် မူတည်ခဲ့တာပါ ။
မြန်မာ့သမိုင်း ရဲ့အပြောင်းအလဲကြီး တစ်ခုကို ဆင်ဖြူရှင် လက်ထက်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ.. တစ်ချက် တိမ်း တာနဲ့ တစ်နိင်ငံလုံး တုန်လှုပ် ခြောက်ခြား ၍ အစည်းပြေပြိး တရုတ် လက်အောက်ခံ နိုင်ငံအဖြစ်သို့ လွယ်လင့် တစ်ကူ ကျရောက်မယ့် အနေအထားပါ၊
ဆင်ဖြူရှင် ဘုရင်ဟာ ရန်သူ တရုတ် တပ်မကြီးတွေ နီးကပ်နေတာကို.. တုန်လှုပ်မှု မရှိပဲ ကြံ့ခိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် စစ်တပ်များ ကို ပြန်လည် စုစည်းခဲ့ပါတယ်။
တရုတ် စစ်သူကြီး မင်းယွီ သည်လည်း အခက်အခဲ များကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အတွက်ဆင်ဖြူရှင် ရဲ့ တုန်လှုပ်မှု မရှိတဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို တွေ့ရတဲ့ အခါ အင်းဝနေပြည်တော်ကို သူ့ တပ်တစ်ခုတည်း နဲ့ မသိမ်းပိုက်နိုင်တော့ လို့ ယူဆ လာပါတယ်၊
အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာ စစ်သူရဲတွေဖြစ်တဲ့ မဟာသီဟ သူရ နဲ့ တိမ်ကြား မင်းခေါင် တို့ရဲ့ မြန်မာ တပ်ကြီးတွေ ဟာလဲ တရုတ် စစ်တပ် အချင်းချင်း မဆက်မိအောင် အဆက် အသွယ် ဖြတ်ပြီးလျှင် တရုတ် စစ်ကူ တပ်နဲ့ ရိက္ခာထောက် တပ်များကို ဟန့်တား ဖြတ်တောက် ထားလိုက်ပါတယ်၊
မင်းယွီ ၏ စစ်တပ်ကြီးဟာ ရှေ့သို့ တိုး၍ သာ ချီတက်လျက် ရှိတဲ့ အချိန် ရိက္ခာများအရေးတစ်ကြီး လို၍ နေတဲ့ အချိန်မှာ မှ မင်းယွီ ၏ တပ်ကို ရိက္ခာများ အရောက် ပို့ဖို့ အပြင်း ချီတက် ထိုးဖောက် လာသော တရုတ် ရိက္ခာထောက် တပ်တွေဟာ မြန်မာ တို့ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို မခံရပ်နိုင်ဘဲ သီပေါ သို့ ဆုတ်၍ ထိုမှ တစ်ဆင့်
လားရှိုး သို့၊ ထိုမှ တဆင့် သိန္နီ တိုင်အောင် ဆုတ်ခွာ သွားပါတယ်၊
မင်ယွီ ရဲ့ တပ်ဟာ အင်းဝမြို့ နဲ့ အနီးဆုံးနေရာကိုရောက် လာတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာစစ်တပ် က အခြား စစ်မှူး၊ စစ်ကဲတွေ ဟာ အင်းဝနေပြည်တော် ကို ပြန်လည် ချီတက်ပြီး အကာအကွယ် ပေးလိုကြပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ မင်းကြီး မဟာသီဟသူရ က" နောက်ထပ် တရုတ် စစ်ကူ နဲ့ ရိက္ခာတပ် မရောက်ရန် သာလျှင် အဓိက အရေးထား ရမယ် "လို့ အမိန့်ပေးခဲ့တာပါ ။ စစ်သူရဲ နေမျိုးစည်သူ ဟာ ကျိုင်းတုံ ကနေ မဟာသီဟ သူရ စစ်တပ်ကြီးနှင့် လာရောက် ပူးပေါင်းပါတယ် ။ ပြီးတော့ သိန္တီ ကို မြန်မာတပ် နှစ်တပ် ပေါင်းပြီး အပြင်း တိုက် တဲ့  အခါ သိန္တီ မှာ ရှိနေတဲ့ တရုတ် စစ်မှူးကြီး တာဆင်ဂါး ဟာ ထိတ်လန့်မှု ပြင်းပြပြီး မိမိ လည်မျို ကို ဓားဖြင့် လှီး၍ အဆုံး စီရင်လိုက်ပါတယ်... ။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ မင်ယွီ ရဲ့ စစ်တပ်ကြီးပဲ ကျန်ပါတော့တယ်..၊ ဤတွင် မြန်မာတို့ အဖို့ တစ်ရန် အေးကာ မင်းယွီ ဘက်သို့ ဦးလှည့် နိုင်လေတော့သည်။ မင်းယွီဟာ သူ့အကြောင်းသူ သိပြီး အင်းဝမြို့တော်သို့ ချီတက်ခြင်း မပြုတော့ဘဲ စစ်တပ်ကြီးကို ဆုတ်ခွာ ခဲ့ပါတယ် ။
မင်းယွီ ဟာ သူ့ရဲ့ ရိက္ခာထောက် တပ် များကို ဖြတ်တောက် ခဲ့သော မြန်မာ တပ်ကြီး ဟာ သူ့တပ်ရဲ့ စစ်နောက်ကြောင်းဘက် တွင်ရောက်နေကြောင်း သိတဲ့ အတွက် လာလမ်း အတိုင်း လှည့်၍ မပြန်ဘဲ
မြောက်ဘက် တူရူ သို့ ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်. ။
ပထမပိုင်း ဂုတ်ထိပ်မှာ အရေး ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့.. မဟာစည်သူဟာ သူရဲ့ စစ်တပ်ကြီး ကို ပြန်လည် စုရုံးပြီး
မင်းကြီး မဟာသီဟသူရ တပ်များနှင့် ပေါင်းပြီးနောက် တောင်တန်း များကို ကျော်ဖြတ် ကာ မင်းယွီ ၏ တပ်ကို အမှီ လိုက်ပါတယ်၊
မင်းယွီ ၏ တပ်ကြီး ကို မောင်းလန် မှ မင်းယု သို့ အလှည့်တွင် ဝိုင်းမိ ခဲ့ပြီး အပြင်း အထန် တိုက်ခိုက် ခဲ့တဲ့ အတွက် မင်ယွီရဲ့ တပ်ဟာ အကျအဆုံး များလာခဲ့ပါတယ်၊
မြန်မာ တပ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဟာ တရုတ် တပ်တွေရဲ့ အင်အား ၃၀၀၀၀ ကို ၃ ရက် လုံးလုံး အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်တဲ့ အတွက် တရုတ် မင်ယွီ ရဲ့ စစ်သည် အင်အားဟာ ၂၅၀၀ ပဲ ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ မြန်မာ စစ်သည်တွေ ရဲ့ ဓားတွေဟာ သွေးတွေ နဲ့ လက်တွေမှာစေးကပ်ပြီး ခွါမရဖြစ်ခဲ့တယ် လို့ ကမ္ဘာ့သမိုင်း မှာရေးသားခဲ့ကြပါတယ်၊
မြန်မာ တို့ဟာ တရုတ်တပ်ကြီး ကို ထွက်ပေါက် မရှိအောင် တင်းကြပ်စွာ ပိတ်ဆို့ ဝန်းဝိုင်း ထားကြတဲ့ အတွက် တရုတ် ဧကရာဇ် က သူ့သမက်တော် မင်ယွီ ကို လှမ်းပို့ တဲ့ ပြန်ဆုတ်ခွာဖို့ အမိန့်စာတောင် မင်ယွီဆီ ကို မရောက်ခဲ့ပါဘူး.. ။
မြန်မာ တပ်တွေ အ၀ိုင်း ခံရတဲ့ အချိန်မှာ မင်ယွီ ဟာ သူရဲကောင်း ပီသစွာသူရတဲ့ ရိက္ခာကိုတောင် ဒဏ်ရာ ရတဲ့ တရုတ် စစ်သည်တွေကိုကျွေးပြီး သူကိုယ်တိုင် ကတော့ သစ်ရွက်တွေကိုသာ စားခဲ့တယ် လို့ တရုတ် ရာဇ၀င်မှာ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။
နောက်ပိုင်း မှာ မင်ယွီ ဟာ သူရဲ့ ကျစ်ဆံမှီး ကိုဖြတ်ပြီး တရုတ်ဧကရာဇ်ထံ ကို ပေးပို့စေပြီး သူကိုယ်တိုင် ကတော့ ကြိုးဆွဲချ အဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီ တိုက်ပွဲမှာ မြန်မာ တပ်တွေဟာ အင်အား ငါးသောင်းရှိတဲ့
၁၇၆၉ ခုနှစ် ကုန်ဆုံး လုချိန်မှာ တရုတ် တို့ဟာ နယ်စပ် မှာ ၆၀,၀၀၀ ထက် မနည်းသော စစ်သည်များကို စုရုံးပြီး ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာပါတယ် ။ စစ်မှူးကြီး မှာလည်း မန်ချူး အစိုးရတို့ လွန်စွာ အားထားရတဲ့ မန်ချူး လူမျိုး နယ်စားကြီး ဖူဟင်း ဖြစ်ပါတယ်၊
ဖူဟင်း ၏ တပ်သည် ငှက်ဖျားရောဂါ ထူထပ် လှသော မိုးကောင်း နယ်မြေ တွင် အလဟဿ လှည့်လည်၍
နှစ်လ တိုင်တိုင် အချိန်ဖြုံး ခဲ့ပါတယ်၊ မြန်မာ တပ်ကြီး မိုးကောင်းနယ် သို့ ရောက်သော အခါ တရုတ်တို့သည် ဧရာဝတီ မြစ်ဘက်သို့ ပြန်၍ လှည့်ကြပါတယ် ။
ရွှေကူ မြောက်ဘက်တွင် ဖူဟင်း ၏ တပ်သည် အီလယ်တူ စစ်တပ် နဲ့ ပေါင်းမိခဲ့ပါတယ်၊ ထို့နောက် မန်းဝန်း မှ ချီလာသော တပ်နှင့် တစ်ဖန် ပေါင်းမိပြန်၍ ဗန်းမော် ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ် ။ သို့သော် ဗန်းမော် ဟာ မြန်မာ တို့ အဖို့ အရေးပါ အားထားသော စခန်းဌာန မဟုတ်ခဲ့ပါ ။
ဗန်းမော် ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် တရုတ် တို့သည် မြို့တစ်မျှ ကြီးမား လှသော ခံတပ် ကို ကောင်းတုံ အရှေ့ ဘက် ၁၂ မိုင် အကွာ ရှိ ရွှေညောင်ပင် စခန်းတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး စစ်တပ်နှင့် အတူ ပါလာသော လက်သမား များကို လှေ သမ္ပာန် ရာပေါင်း များစွာ တည်ဆောက်စေ၍ ကောင်းတုံ ကို လှေ တပ်ဖြင့် ဝိုင်းကြ ပါတယ်၊
အဲဒီနောက် တရုတ် တို့ဟာ ကြံ့ကြံ့ခိုင်စွာ အတင်းအမာ ခုခံနေသော မြန်မာတွေ ရဲ့ ကောင်းတုံ ခံတပ် ကို အမြောက် လက်နက် များ စုံလင်စွာဖြင့် ရက်သတ္တပတ် ပေါင်းများစွာ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်၊
မြန်မာ စစ်မှူး စစ်ကဲ တို့ဟာ ယခင် အတိုင်း တရုတ် ရိက္ခာထောက် စစ်တပ် ကို ဖြတ်တောက်ရန် စစ်တပ်ကြီး တစ်တပ် စေလွှတ်ပြီး တရုတ်တို့ကို ဝိုင်းညှပ်ကာ တဖြေးဖြေး ချီတက်ကြပါတယ်...
ကောင်းတုံ ကို မြန်မာ့ ရေတပ် မှ အကူအညီ ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း တရုတ် တို့၏ လှေသမ္ပာန် များသည် လည်း မြန်မာ တပ်၏ ထွင်းဖောက်ခြင်း ကို ခံကြရပါတယ်. ။.
ထို့နောက် ရွှေညောင်ပင် တရုတ်ခံတပ် ကို မြန်မာတို့ အပြင်းအထန် ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ရွှေညောင်ပင် ခံတပ် ကို မြန်မာ တို့ ရသောအခါ တရုတ် တို့သည် ကောင်းတုံ ကို ဝန်းရံနေသော တပ်နှင့် သွားရောက် ပူးပေါင်းကြပါတယ် ။
မြန်မာတို့ ၏ ခံတပ် အခြေ ၌ တရုတ် တို့သည် အတုံး အရုံး စုပုံ ကျဆုံးကြပါတယ် ။ တရုတ် တို့ရဲ့ ထွက်ပေါက် အားလုံး ကိုလည်း မြန်မာ များက ပိတ်ဆို့ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် တရုတ်ဘုရင် ဟာ စစ်ပြေငြိမ်းဖို့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ပါတယ်၊
ထူးခြားတာ တစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်...။
တရုတ် က စစ်ပြေငြိမ်းဖို့ ကမ်းလှမ်းတာကို တရုတ် တို့ စကား ကမ်းလှမ်း လာလျှင် ဗိုလ်ချုပ် မဟာသီဟသူရ ဟာ ရှေ့ရေးကိုမျှော်တွေးပြီး သဘောတူခဲ့ပါတယ် ။ဘုရင့် အမိန့်ကို မခံယူတော့ဘဲ လက်ခံခဲ့ ပါတယ်၊
ထို သတင်းကိုကြားတာ နဲ့ ဆင်ဖြူရှင်မင်း ဟာ အမျက်တော် ရှသွားပါတယ် ။ ပြီးတော့ တရုတ်ဆီ ကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ စစ်ပြေငြိမ်းရေး.. လက်ဆောင် ပဏ္ဍာတွေကို အဲဒီ စစ်တပ်ကြီး က အကြီးအကဲ ဗိုလ်မှူး တပ်မှူး တို့ရဲ့ဇနီး များအား ရွက်စေလျက် သုံးရက် တိုင်တိုင် နေလှန်းခဲ့တယ်လို့ ရာဇ၀င်မှာဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ။
Posted by ko kyaw lwin
Posted by Simon Cole at 11:43 PM